5 လူမှုမီဒီယာ၏မထင်မှတ်ဖွယ်အန္တရာယ် — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဂျက်စီကာ Barefield မှဧည့် post ကို
ငါ့ကိုမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ပေးခြင်းအားဖြင့်စတင်စို့. ဤဆောင်းပါးသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်မည်မျှဆိုးသောအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး. ဖြည့်ညှင်းအတွက်အသုံးပြု, လက်ျာနှလုံးကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်အတူ, တကအံ့သြဖွယ်အရာရှိနိုင်ပါသည်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လူမှုမီဒီယာစားသုံးမှုနှင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှကြွလာသောအခါဤဆောင်းပါး၏အမှတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာခရစ်ယာန်အသက်တာတစ်ဦးကြော့ကှငျးကိုဖွစျစနေိုနှင့်သင်၏နှလုံးကိုစစျဆေးဖို့သငျ့ကိုအားပေးကြောင်းနည်းလမ်းအချို့ကိုထောက်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားဆိုရှယ်မီဒီယာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပွစျရှိအလိုဆန္ဒများကိုအစာကျွေးနိုင်သည်ကိုငါးနည်းလမ်း.
ဒါကကျွန်တော်တို့အရင်ကမကြားရပြီအချည်းနှီးဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ထပ်ရကျိုးနပ်မယ့်. ကျနော်တို့ဧဖက်အတွက်သတိပေးနေကြပါတယ် 5:16-17 လက်ထက်၌ဆိုးယုတ်ကြ၏နှင့်ကျွန်တော်တို့အားအချိန်ရဲ့အကောင်းဆုံးအသုံးချသင့်ကြောင်း. သင်တို့ရှိသမျှသောသူတို့သည်ဆိုဒ်များစစ်ဆေးနေ၏အစားလုပ်နေနိုင်အဘယျသို့ခဏစဉ်းစားကြည့်ပါ. ရက်ချိန်းမှာစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်, ငါတို့သည်ငါတို့၏ဖုန်းပေါ်မှာအဘို့ဆုတောင်းကြလော့မှလူများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်နှင့်ငါတို့မိသားစုနှင့်အဆွေတို့အဘို့ဆုတောင်းပဌနာသောသူတို့သည်အပိုမိနစ်သုံးဖြုန်းနိုင်. မုချ, တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်အခြားမှာ, ငါတို့ရှိသမျှသည်နေ့ရက်ကာလ၌ Facebook ပေါ်မှာနာရီဖြုန်းနှငျ့ဘုရားသခငျ၏တရားစကားဖွင့်ဖွင့်လှစ်ဘယ်တော့မှ၏အပြစ်ရှိကြောင်းများမှာ. တိုင်းအခိုက်သခင်ဘုရားထံမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်းရကျိုးနပ်မယ့်, "ငါသည်ပေါ်မှာငါ့အချိန်ဖြုန်းနိုင်ပိုပြီးကျိုးနပ်တစ်ခုခုရှိပါသလား?"အချိန်ကိုအများစုဟာ, အဖြေဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်.
ငါဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်များ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှု့ဘာမှအကြောင်း post မှ OK ကိုဖွင့်စဉ်းစားသို့လှည့်စားနိုင်ထင်. ကျနော်တို့တိုင်ကြား, ကျွန်တော်တို့အမည်ဝှက်ကား Bash လူ, ကျွန်တော်တို့အခွင့်အာဏာရှိလူများမလေးစားတဲ့, ကျွန်တော်နာမည်ကြီးတွေကိုစဉ်းစားသမျှကိုပြောပါ, သူတို့အမှန်တကယ်လူမဟုတ်ကြလျှင်အဖြစ်. ငါတို့သည်တကယ်ကမဆိုဘို့ဖြေဆိုရန်မလိုပါယုံကြည်. အခုအချိန်မှာ-အဲဒီမှာကျနော်တို့အသက်ရှင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ရပ်သောအခါပုဂ္ဂလိကဘာမျှမဖြစ်နှင့်ငါတို့စကားသည်အ account တစ်ခုအားငါပေးမည်သင့်ရဲ့အခန်း၏ privacy ကိုအားဖြင့်အရူးလုပ်ခံရမနေပါနဲ့. မဿဲတော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး, "တရားသဖြင့်စီရင်၏နေ့တွင်, လူသူတို့စကားကိုပြောတိုင်းမထီလေးစားပြုသောသူစကားလုံးများအတွက်အကောင့်ကိုငါပေးမည်။ "ငါတို့သည်ငါတို့၏အဆင့်အတန်းကို update ကျွန်တော်တို့ကိုဤသတိပေး၏နောက်လာမည့်အချိန်သတိပေးပါစေ.
3. social media discontentment လောင်စာနိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကိုအခြားသူများလုပ်နေတာဟုအဘယ်သို့ကျော်လောင်းတိုးချဲ့အချိန်ဖြုန်းလိုက်တဲ့အခါ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးရှိသမျှတို့သည်အမှုအရာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲယူသို့မဟုတ်ထွက်ပေါ်ပျောက်ဆုံးနေ. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအတူတူပင်မကြည့်ကြဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးခွန်းထုတ်စေနိုင်ပါတယ်. အဘယ်ကြောင့်ငါကကိုးကား၏မစဉ်းစားခဲ့? ငါစတိုင်သူမ၏သဘောခဲ့ဆန္ဒရှိ. သူတို့ရဲ့အိမ်အသစ်ငါတို့ထက်လမ်းပိုကြီးဖြစ်ပါသည်! ကျွန်တော်တို့သတိမထားဘူးဆိုရငျ, Facebook သို့မဟုတ် Pinterest အပေါ်သုံးဆယ်မိနစ် unproductive feeling သင်ထွက်ခွာနိုင်, ဆွဲဆောင်မှုမရှိ, နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝနှင့်အတူ underwhelmed. ဟေဗြဲကျွန်တော်တို့ကိုတိုကျတှနျး, "ပိုက်ဆံ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကနေအခမဲ့သင်၏အသက်တာ Keep, သငျတို့သယျနှငျ့အတူအကြောင်းအရာဖြစ်, သူကပြောပါတယ်များအတွက်, '' ငါသည်သင်တို့ကိုမစွန်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ ' "ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်အတွက်ကျနော်တို့လိုအပ်တဲ့သမျှသောပေးသောကြောင့်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာယုံကြည်သူများအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာနှင့်အတူအကြောင်းအရာဖြစ်နိုင်. လူမှုရေးမီဒီယာများ၏သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုသင်ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်ကူညီပေးနေသည်ဖြစ်စေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေး.
4. social media မာနထောင်လွှားလောင်စာများနှင့်အတွင်းပိုင်းအာရုံစူးစိုက်သငျသညျစောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ
လူမှုမီဒီယာလျင်မြန်စွာ Self-မြှင့်တင်ရေးအဘို့ငါတို့ကိုယ်ပိုင်စင်မြင့်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုံ့ဆျောမှုကယ့်ကိုကြှနျုပျတို့ပွုသောအမှုအရာပို့စ်တင်ဘို့ဖြစ်၏ဘယ်အရာကိုကိုယျ့ကိုယျကိုမေးပါရန်ရှိသည်. ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ချင်းစာသို့မဟုတ်ချီးမွမ်းခြင်းကိုရှာကြ၏? ကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာစဉ်းစားသို့မဟုတ်ကျနော်တို့လုပ်နေတာဖြစ်ဖူးတဲ့ပျော်စရာအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ကြွားခံရဖို့ချင်ပါနဲ့? သင်သည်အမြဲတစေသင့်ရဲ့ post ကိုရတယ်မည်မျှ "အကြိုက်များကို" သို့မဟုတ် "Retweet" စစျဆေးပါနဲ့? ဤအမှုအရာလောင်စာမာနထောင်လွှားအားလုံးနှင့်ကိုယျ့ကိုယျကိုအာရုံစိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်. ဤသည်၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုကျော်လွန်ချဲ့ထွင်တဲ့ပလက်ဖောင်းသူမည်သူမဆိုများအတွက်အထူးသဖြင့်ခက်ခဲကြော့ကှငျးကိုဖြစ်နိုင်. သငျသညျဂီတပြုပါသို့မဟုတ်တစ်လူကြိုက်များဘလော့ဂ်ရှိမရှိ, လူထောင်ပေါင်းများစွာ၏စကားကိုနားထောငျနေကြတယ်လို့စိတ်ထဲကြွလာအရာ​​အားလုံးကိုဟုဆိုထိုက်သည်မဆိုလိုပေ. ကျနော်တို့ Retweet ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ရမယ်, မှတ်ချက်များ, နှင့်အကြိုက်အလိုအလျှောက်ကျွန်တော်တို့ post အရာကိုတရားဝင်မှုမပေးပါဘူး. ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကို၏လှုံ့ဆျောမှုရှုမြင်ပြီးကောင်းကောင်းလက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တိုင်အနားမှာအရူးလုပ်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်. ငါရှမွေလသည်အဖြစ် 2:3 သတိပေး, "ဒါကြောင့်ဂုဏ်ယူစွာပြောနေတာစောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်သင်၏နှုတ်ထိုကဲ့သို့သောခိုင်ခံ့သောစိတ်ဟောပြောပါလေစေမနေပါနဲ့, သခင်ဘုရားအဘို့အကျင့်ကိုချိန်တွယ်ကြသည်ကိုသိနှင့်ကိုယ်တော်အားဖြင့်သူတစ်ဦးသညျဘုရားသခငျဖြစ်ပါတယ်။ "
ခပ်သိမ်းသောအဘို့အဆိုရှယ်မီဒီယာဆက်ဆံရေးအဘို့ရှိပါတယ်အကျိုးခံစားရ, တစ်ဦးအားနည်းချက်ရှိပါတယ်. သင်နှစ်သက်သောသူတွေနဲ့အတူတက်ထားရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမလွယ်ကူ?). သင်ဆဲနက်ရှိုင်းသောရှိပါသလား, လူတစ်ဦးအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကားပြောဆိုချက်? ကလူအများကြီးကိုသင်ကိုချစ်-နှင့်သင်ပင်မသိရပါဘူးလူတွေအများကြီးအတူတက်ထားရန်လွယ်ကူသောကြောင့် (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအများအပြား?). သငျသညျများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနှင့်အတူ oversaturated နေကြတယ် 300 သင်မေတ္တာရှင်၏ကောင်းတစ်ဦးအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကြောင့်လူတွေရဲ့ဘဝတွေကို 10 လူငျသညျရက်သတ္တပတ်မှတစ်ပတ်မြင်? ကျနော်တို့လျင်မြန်စွာအစားလူမျိုး၏ရည်းစားများအချက်အလက်များ၏စားသုံးသူများဖြစ်ကိုယျ့ကိုယျကိုလေ့ကငျြ့ပေးနိုငျသညျ. တစ်စုံတစ်ဦး၏ဘဝအကြောင်းကိုသိရှိနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝအကြောင်းကိုအရာအားလုံးကိုဝေမျှတစ်ဦးကိုမှန်ကန်မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး. ၏သင်တန်းကိုယရှေုသညျကစစ်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ၏ပြီးပြည့်စုံသောစံနမူနာသည်. ယရှေုသညျသှနျသငျအဖြစ်, "ကျနော့် command ကိုဤသူကား: ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြား Love. သာ. မြတ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကဒီထက်အဘယ်သူမျှမရှိတယ်, သူသည်မိမိအဆွေတို့အဘို့မိမိအသကျကိုစှနျ့ပါ။ "ချစ်ကြည်ရေး status update များနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုများ၏ပေါင်းလဒ်ထက်ပို. ချစ်ကြည်ရေးယဇ်ဖြစ်သတည်း. ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဝန်ကိုဆောင်သောင်. ဒါဟာကိုယ့်ကို virtual ကမြင်သာထင်သာရှိရပါမည်မဟုတ်င်.
ဂျက်စီကာ Barefield ဝါရှင်တန်တှငျနထေိုငျ D.C. သူမ၏ခင်ပွန်းကခရီးစဉ်နှင့်အတူ, နှင့်၎င်းတို့၏သားမေး. သငျသညျသူမ၏ဘလော့ဂ်မှာသူမ၏မှပိုပြီးဖတ်နိုင်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာရန်လိုပဲ.
Xavier • စက်တင်ဘာလ 24, 2013 တွင် 12:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်ဒါမှန်သည်. ငါပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ငါလူမှုရေးမီဒီယာနှင့်ရှေ့ဆက်ယူဆောင်အပေါငျးတို့သအချက်များအပေါ်ငါ့အချိန်ကာလနာရီနှင့်နာရီဖြုန်းကြောင်းဝန်ခံပါလိမ့်မယ်, ငါတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်. ကျွန်မချင်သောငါ၏စိတ်နှင့်နှလုံးထဲမှာသိသည်ထွက်ခုတ်ဖြတ်ရန်ရှိသည်, သို့မဟုတ်ကိုအလွန်ကြောင့်နုတ်, ဒါပေမယ့်လွယ်ကူသည်မဟုတ်. သင်တို့မူကားရှင်းလင်းစွာငါ့ကိုရန်ဤစကားကိုအားဖြည့်ရန်အသုံးပြုနေသောသင်ပါးထားသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုဘုရားသခငျ၏စကားများ. ဤဆောင်းပါးတွင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် :)
အက်ရှလေ • စက်တင်ဘာလ 24, 2013 တွင် 12:19 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ် post ကို! တကယ်ပဲငါ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှုထင်နှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလုပ်!
Tyron • စက်တင်ဘာလ 24, 2013 တွင် 12:21 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အလွန်ကောင်းသောဖတ်ပြီးသား! အနည်းငယ်ကျော်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်သည်အထိလူမှုကွန်ယက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နှင့်ဤရတဲ့အကြောင်းရင်းတချို့ရှိနေပါတယ်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်. ငါတကယ်အာရုံစိုက်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်သောအရာကိုအာရုံစိုက်ဖို့ငါ့အလူမှုကွန်ယက်မဖျက်ပစ်စဉ်းစားခဲ့ကြ. ဤနေရာတွင်ကောင်းသောအချက်များကို၏လောတ. သင့်ရဲ့ကရေးသားဖို့အချိန်နှင့်ရှယ်ယာယူပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
Daniela • စက်တင်ဘာလ 24, 2013 တွင် 12:27 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး! တကယ်မှန်ပါတယ်. ကျနော်ကျိန်းသေငါ၏အလူမှုမီဒီယာစားသုံးမှုအပေါ်အလုပ်မလုပ်ဖို့လိုအပျ. ဒါဟာအလွန်ငါ Pinterest အပေါ်လာပြီရပ်တန့်အလွန်အကြောင်းပြချက်များထဲမှစားသုံးမယ့်. ခွဲဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
ဂျေး • စက်တင်ဘာလ 24, 2013 တွင် 12:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Stacey • စက်တင်ဘာလ 24, 2013 တွင် 12:57 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီပို့စ်တင်ဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါ Facebook ပေါ်မှာရတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်အတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြ. နောက်ကျမအားလုံးအရူးစိတ်ဆိုးစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ပုံရသည်. ဤသူသည်ငါစကားကိုနားထောငျဖို့လိုအပျအရာအားလုံးကြီးနဲ့ကျွန်မသတိပေးခံရဖို့မလိုအပ်သည့်အခါပြန်ဖတ်ပါလိမ့်မယ်. သင်နှင့်ခရီးစဉ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ.
မိရှေ • စက်တင်ဘာလ 24, 2013 တွင် 1:20 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Eulaivi Clutario • စက်တင်ဘာလ 24, 2013 တွင် 1:30 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုများမှာ! သင်ဒီမှာရှိဤမျှလောက်များစွာသောကောင်းသောအချက်များ. နားလည်နှင့်ငါတို့မျိုးဆက်ရန်အလွန်သက်ဆိုင်ရာရဲ့ကြောင်းကိုသင်၏ပညာသည်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလော့! :)
သငျသညျ • စက်တင်ဘာလ 24, 2013 တွင် 1:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤအစွမ်းထက်ခွဲဝေမှုများကနှလုံးမှဖြတ်ပြီ. ကျနော်တို့အားလုံးကဒီဒေသမှာလိုသောတွေ့ရှိယုံကြည်. ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခရီးစဉ်နှင့်ဂျက်စီကာ. ဘုရားသခငျသညျသငျအသုံးပွုဆက်လက်နိုင်ပါစေ .
ကာလကျ • စက်တင်ဘာလ 24, 2013 တွင် 2:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းပြီဟုဆိုသည်! ငါအတိတ်အခကြေးငွေနှစ်အတွင်းဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် ပတ်သက်. ဤအတူညီအတွေးများကိုအချို့ရှိခဲ့ပါတယ်. စာအရေးအသားကိုသိမ်းဆည်းထားပါ!
လမ်း • စက်တင်ဘာလ 24, 2013 တွင် 4:56 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Themba • စက်တင်ဘာလ 25, 2013 တွင် 5:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Clara • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 4:27 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့နှင့်ခံယူချက်ပေးထားဖြစ်ကြောင်းဟောပြောသောဤစကားကိုအဘို့ဤမျှလောက်ဂျက်စီကာကျေးဇူးတင်ပါသည်. ဘုရားသခငျသညျသငျနှငျ့သငျသညျအိမ်ထောင်စုသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါစေ :-)
Angela • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 5:27 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီသိရှိပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်! ဤသည်ကိုအခြားသူများနှင့်ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ယေရှုနှင့်လျော့နည်းပေါ်မှာငါတို့မျက်စိ fix ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလှုံ့ဆျောပေးသငျ့တယျ.
James • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 5:27 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကို…. တစ်ဦးတည်းကိုဘုရားသခင်အားဘုန်းအသရေ….
အမှတ် • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 5:36 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်, အတွက် “နည်းနည်းကလူ” အသံတစ်သံထွက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားရန်နံပါတ်များကိုပြောတတ် “လူမှုရေး” တန်ဖိုးအားလူမှုရေးမီဒီယာကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါပါတီအားတက်ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !
ဂျင်မီ McCrary • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 5:38 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Oyishoma Emmanuel • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 5:40 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကြောင့်မှန်. ကျနော်တို့ရည်ရွယ်ချက်မပါဘဲလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်အဖိုးတန်အချိန်ဖြုန်း, နှင့်ရည်ရွယ်ချက်မြေပြင်ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခါတိုင်း, အလွဲသုံးစားမှုမလွှဲမရှောင်ဖြစ်ပါသည်. ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ငါအချိန်တိုင်းဒီအပြစ်ရှိတာပါ; ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ဦးစားပေးလမ်းကြောင်းလွှဲကျေးဇူးတော်အဘို့ဆုတောင်းပဌနာ.
အာဒိ Moore • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 5:44 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကတကယ့်အကောင်း Post ဖြစ်ပါတယ်. ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ဒါကြောင့်ဖတ်ရှုခြင်းကြောင့်လူမှုမီဒီယာများ၏ထောငျခြောမှငါ့မျက်စိဖွင့်လှစ်ခံစား. :) ကြေးဇူး & ငြိမ်းချမ်းရေး.
ယောသပ်သည် • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 6:03 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါအပြီးအပိုင်အစောပိုင်း၌ငါ့ Fakebook ဖျက်ပစ်အတိအကျအဘယ်ကြောင့် 2012. ကိုယ့်ကိုယ့်အတွက် cable ကိုတီဗီဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ဘယ်လောက်နဲ့တူ 2001, ငါ Fakebook သို့မဟုတ်တီဗီဖြစ်စေလက်လွတ်မ. FB ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရန်လွယ်ကူစေသည်, ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းအရာဖြစ်ပါသည်. အလုပ်အတွက်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖြစ်ခြင်း (ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်) ငါသည်ငါ့အခမဲ့အချိန်အတွက်ပေါ်မှာအချိန်ဖြုန်းချင်ကြပါဘူးဘယ်ကြောင့်အားလုံးပိုအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အချိန်ဖြုန်းဖို့ဒါလွယ်ကူသည်. ငါ YouTube ပေါ်မှာပေါ့ အကယ်., အခြားခရစ်ယာန်များအထဲကနေဆောဗီဒီယိုများစောင့်ကြည့်ဖို့င်. ငါ Highly ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုဖို့တိုင်းခရစ်ယာန်အကြံပြု: “Facebook မှာအတူငါတို့ဝိညာဉ်ဖွဲ့စည်းခြင်း” Shane Hipps အားဖြင့် (ဒုတိယအနေသဘာဝတရားဂျာနယ် dot com)
Leticia • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 6:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အဆင်ပြေ • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 6:41 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး, အကြီးအ post ကို, ငါတကယ်မင်္ဂလာရှိပါ၏.
ဘာဘရာ • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 6:56 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
လုလင်ပျိုငါဒါကြောင့်သင်ကပြောသည်အတိအကျဘယ်သို့သောအားဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည် …နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဖြုန်းသင့်ကြောင်း facebook ပေါ်မှာနာရီဖြုန်း! ငါသည်ဤဘလော့ဂ်ကိုချစ်…လာမယ့်ကိုသိသောဥာဏ်ကိုစောင့်ရှောက်!
ပြစ်ကိလ • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 6:58 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့၏မျှတတဲ့အနေအထားကိုကြိုက်နှစ်သက်; လုံးဝလူမှုမီဒီယာရှုတ်ချမဟုတ်, သေးသည်အပြစ်ရှိများအတွက်ကိစ္စများ / စိတ်သဘောထားအထဲကညွှန်ပြ. iLove ငါ့ကိုသတိပေး.
Roshell • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 7:05 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါကလိုအပ်ခွဲဝေမှုအဘို့ကောင်းသော points..thanks .
ခရစ္စ • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 8:16 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခွဲဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်! ဒါကြောင့်လူမှုမီဒီယာမှကြွလာသောအခါငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်သတိထားသင့်တယ်ဘယ်လို Excellent ကသတိပေးချက်များ.
Susan • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 8:29 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤဆောင်းပါးတွင်ဘို့သင့်ကိုဂျက်စီကာကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် & ငါမြင်ရနိုင်ဒါကြောင့်သင် fb ပေါ်မှာတင်ဘို့ခရီးစဉ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် & ဖတ်ဘလော့ဂ်ထံသို့လာ.
Liz • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 8:41 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရစ္ • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 8:56 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး! ဤသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်! တိုင်းအမှတ်ငါ့ကိုဝင်တိုက်ခြင်းနှင့်ငါတကယ်ကြားဖို့လိုအပျ. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ!
ပန်းရောင် • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 9:23 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီစာရေးဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ဒါဟာငါဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ငါ့အချိန်ကန့်သတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလွန်အမြင်သည်နှင့်ငါ့ကိုအသိအမှတ်ပြုအတွက်အများကြီးကူညီပေးခဲ့. သငျသညျဖျောပွထားဖူးတဲ့အရာအတော်များများကငါဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်ခပ်သိမ်းသောအရာဖြစ်ကြ၏. ဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်အလွန်အကျွံအချိန်ဖြုန်းသင့် Blog ကယ့်ကိုငါ့အဘို့စကားကြောင့်ထားကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျများအတွက်အကျိုးရှိသောမဟုတ်ပါဘူး. နောက်တဖန်ကျေးဇူးတင်စကားဤမျှလောက်
လော်ရီ • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 10:41 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
နံပါတ်ပေါ်အစက်အပြောက်4ကျွန်တော့်အတွက်. စောင့်ကြည့်ဖို့တစ်ခုမှာ – ကြေးဇူးတငျစကား
Terrell • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 11:09 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Clement Magombo • စက်တင်ဘာလ 27, 2013 တွင် 2:25 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခငျသညျဤအမျှဝေဘို့သင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ. ငါသည်ကျင့်သမျှထဲမှာစင်ကြယ်ခြင်းနှင့်စဉ်းစားဟန်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်အွန်လိုင်း / အော့ဖ်လိုင်း. ကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကို
FROM မှ • စက်တင်ဘာလ 27, 2013 တွင် 3:31 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကိုဆောင်းပါး! ကောင်းပြီတင်ခဲ့သည်နှင့်ဟန်ချက်ညီ. မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Elton • စက်တင်ဘာလ 27, 2013 တွင် 6:18 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အားလုံးအပေါ်တရားစွဲဆိုအဖြစ်အပြစ်ရှိ5မှတ်…ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
အာဒံကို • စက်တင်ဘာလ 27, 2013 တွင် 7:35 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကြှနျတေျာ့အလုပ်အွန်လိုင်းကြောင့်ဤဆောင်းပါးကိုအမြန်ငါ့မျက်စိဖမ်းမိကကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလူမှုရေးမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်သည်. ဤအမှုသည်ငါ့အလုပ်မဖြစ်မီငါလုံးဝဤဆက်စပ်နိုင်. အဘယ်သူမျှမကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ရှိလျှင်ဒါဟာတကယ်ကိုအချိန်ပြုန်းတီးနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာသေချာဘို့သတိနဲ့ချဉ်းကပ်တစ်ခုခုဖြစ်သင့်!
Naisha • စက်တင်ဘာလ 27, 2013 တွင် 9:32 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ငါ့ Facebook ပေါ်မှာဒီ link ကိုမြင်ဖတ် dreading ခံခဲ့ရသည်ငါကငါ့ကိုမပြစ်ဒဏ်ချမည်ဟုသိလို့ယနေ့ငါကလည်း, “အိုကေ… ငါ့ကိုရှိသည်ကြပါစို့။” ဟားဟား. ဒီနေရာမှာပဲအကြောင်းကိုအရာအားလုံးကိုငါအွန်လိုင်းငါ့အချိန်ဖြုန်းနဲ့ကျွန်မသူမအချို့လမ်း၌ဤမိမိကိုယ်ကိုနှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့လျှင်ဤဆောင်းပါးတွင်ရေးသားခဲ့သည်သူကဒီ posted ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆမယ့်ငါဘယ်လိုမှန်. ဒီတော့သယ်ဆောင်သို့မဟုတ်တူညီသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသယ်ဆောင်ခဲ့ဘူးသူကိုအခြားလူများရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရဖို့ကောင်းတဲ့က. ဘုရားကျောင်းမှာသင်ဤကဲ့သို့သော Stuff ဖို့ဝန်ခံမထားသင့်တူသောခံစားရလေ့, ကျွန်တော်တို့ဟာတခြားအဘယ်သူမျှမကနှင့်အတူရုန်းကန်သောစိတ်ကူးဖန်တီးသောကွောငျ့. ငါသည်ငါ့ခင်ပွန်းစကားပြောငါ့ iPod အပေါ်အချို့သော app များကိုဖျက်ပစ်ပုံကိုသူ့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ရုံကတခြားနေ့က (ဟုတ်တယ်ငါနေဆဲအနေနဲ့ iPhone တစ်ခု iPod ရှိသည်နှင့်မရ, ရွေးချယ်မှုများက) ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ / တရားမဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်နေသူများကဖန်တီးသောကွောငျ့. ငါသည်သင်တို့ကိုအိမ်မှာသင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုဖန်တီးနိုင်ရှိရာနေအိမ်ဒီဇိုင်းကစားရန်သုံးပါနှင့်အလှည့်အတွက်ကျနော်တို့တှငျနထေိုငျအိမျတျောကိုအတူဒါစိတ်ဓာတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်. ငါ၏အကိုယ်ပွားငါမဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်စုံတစ်ဦးသောကွောငျ့ငါနေဆဲငါကကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း FB ပေါ်မှာ Mall ကကမ္ဘာ့ဖလားကစား ချစ်. ငါ့ခင်ပွန်းဝန်ခံ, သူမတော်တော်ဖြစ်ပါသည်, ပိန်လှီသော, လွတ်လပ်ရေးနှင့်ငါမှတစ်ဆင့်အသကျရှငျကိုခံစားသည်ဟုစိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်ပါသည်. ဒီတစ်ခါလည်းငါလိုက်တယ်အသံသို့မဟုတ်လူတွေကိုငါသိပ် shared ထင်ပေမဲ့ဤအမှုသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်ဖြစ်ပါတယ်. ငါကျွန်တော်တို့ကိုစာရေးဆရာနှင့်အခြားမှတ်ချက်များနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်မျှဝေအားဖြင့်ကိုယ်သိသောအရာကိုအားဖြည့်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
ChinaJohnson • စက်တင်ဘာလ 27, 2013 တွင် 11:44 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မအနေဖြင့်အဘို့အကြှနျုပျ၏ Facebook နှင့် Instagram ကိုမဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မည်. ဤသူကားငါ၏ပါတီအားတက်ခေါ်ဆိုခခဲ့သည်. အကြှနျုပျ၏ခင်ပွန်း၏ဤအကြောင်းကိုငါ့ကိုပြောပြထားပြီးနှင့် discontentment ဝေးလွန်းသွားပြီ! သငျသညျဂျက်စီကာကျေးဇူးတင်ပါသည်!
အာရုန်သည် • စက်တင်ဘာလ 27, 2013 တွင် 1:04 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အရမ်းရယ်ရတယ်ဒီဒါမှန်သည်။. ကံကောင်းစွာ, ကိုယ့်အကြောင်းကိုငါ့အလူမှုကွန်ရက်အကောင့်ဖယ်ရှားပြီးပြီ3လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ :: D
ရစ်ချက် • စက်တင်ဘာလ 27, 2013 တွင် 1:46 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ် Post ကို!
ယောရှု • စက်တင်ဘာလ 27, 2013 တွင် 9:59 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကတကယ်င်! ငါ့ကို thinkin တယ်!
RJ • စက်တင်ဘာလ 30, 2013 တွင် 6:21 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါက Facebook ကနေဂုဏ်နတစ်ပတ်ယူရှည်လျားချိုးတယ်, အီးမေးလ်ပို့ရန်, နှင့် Instagram ကိုငါ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌တွေ့မြင်လူတို့နှင့်အတူငါရှိသူတို့အားဆက်ဆံရေးအပေါ်အလုပ်မလုပ်.
Tyler • စက်တင်ဘာလ 30, 2013 တွင် 7:21 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Fantastic ပစ္စည်းပစ္စယ! ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားပေါ့နှင့် Retweet နှင့်အကြိုက်သို့ဤမျှလောက်စတော့ရှယ်ယာချပြီး ပတ်သက်. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒီတော့မှန်! ကျနော်ကျိန်းသေတွစ်တာ / Facebook အထဲကလာနိုငျကွောငျးအခြို့သောကောင်းသောအရာကသူတို့ဖြစ်ကြသည်ထင်ပေမယ့်ကအားလုံးကိုသငျသညျစိတျနှလုံးအဘယ်မှာအကြောင်းကိုဖွင့်!
THOMASSINGWA • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 12:51 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
wow ငါ့အဘို့ရေးသားခဲ့တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်,ဘဝလှူအမြဲသင်နှင့်သင့် family.Trip အမြဲအဆိုပါဂီတရက်ပေါင်း၏လူဖြစ်ခဲ့သည်ကိုကောင်းကြီးပေးမည်အကြောင်း,Written စသည်တို့ awake.we ငါ့ကိုစောင့်ရှောက်သင့်အဘို့အဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း
နေရောင် • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 11:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Facebook ကအခမဲ့သောကြာနေ့?! ငါ့ကို join! :P ကိုအောက်တိုဘာလတစ်ခုလုံးကိုလ!
ဖေါ်ပြ: Lupe များ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်
Miranda • အောက်တိုဘာလ 8, 2013 တွင် 1:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
တကယ်ပဲကောင်းသော post ကို! social media ကိုအနည်းငယ်လွန်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါစိတ်ဝိညာဉ်ကိုရောက်ရှိကြပြီး၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်အတူတစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့စိုက်လျက်နှင့်မိသားစုများနှင့်အတူအသင်းတော်၌နှင့်သူတို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေကြသည်ကိုမြင်သောအခါ။. ဒါကငါ့ထံသို့အံ့သြဖွယ်င်.
Keinya • အောက်တိုဘာလ 18, 2013 တွင် 5:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး. ဒါဟာတကယ်ငါ့အားမိန့်တော်မူခြင်းနှင့်ငါကတန်ဖိုးထား. ဒါကောင်းစွာတင်ခဲ့သည်နှင့်ထင်ဟပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေအပေါ်အချို့သောအကြီးအကွံဉာဏျရှိပါတယ်ရဲ့. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Marjorie • အောက်တိုဘာလ 21, 2013 တွင် 7:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီပို့စ်တင်ဘို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်! ငါကျိန်းသေဒီဖတ်ရှုဖို့လိုအပ်သောကွောငျ့ဘုရားသခငျသညျယနေ့သင့်ရဲ့ Blog ကိုမှငါ့ကိုဦးဆောင်နိုင်အောင်ဝမ်းသာတယ်!
Jerdon • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:03 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤဘလော့ဂ်ကြွလာများနှင့်ခရီးစဉ်နှင့်သူ၏ဇနီးတို့ကထိုအကြောက်မက်ဘွယ်ပို့စ်အားလုံးဖတ်နေတတ်. သငျသညျနှစျကောင်းသောအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါ!!! ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ.
pelumi • နိုဝင်ဘာလ 3, 2013 တွင် 9:47 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
TheMesenger • နိုဝင်ဘာလ 8, 2013 တွင် 8:54 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
TheMesenger • နိုဝင်ဘာလ 8, 2013 တွင် 8:51 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါဟာဝေးရဘုရားထံမှအချိန်ယူနိုငျကွောငျး sooooo မှန်လည်းသင်အချိန်ရှိသည်ဖို့မထင်ကြလိမ့်မည်4သူ့ကိုကျနော်တို့ကအချိန်အောင်ကိုဖြတ်ပါလိမ့်မယ်
kat • နိုဝင်ဘာလ 17, 2013 တွင် 12:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကြောက်မက်ဘွယ်ဖတ်. ဝန်ခံရမည်, ကိုယ့်တော်တော်လေးယောက်ျားလေးများနှင့်တော်တော်အမှုအရာကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ဘေးဖယ်သညျဘုရားသခငျတွန်းလေ့ကြောင်း Tumblr ပေါ်မှာရှိသမျှသောဤအပေါ်ယံအမှုအရာအားဖြင့်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားတဲ့အချိန်အများကြီးဖြုန်း. ကဝမ်းနည်းင်, ဝမ်းနည်းဖွယ်အရာ; ကိုယ်ကသူ့စကားလုံးပေါ်တက်ဖတ်နေနှင့်ကိုယ်တော်နှင့်အတူပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းနိုင်….မျက်စိဖွင့်လှစ်ကျေးဇူးတင်စကား!
မေတ္တာ • ဒီဇင်ဘာလ 28, 2013 တွင် 5:57 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး. ကိုယ့်နှစ်ခုကွန်ရက်များပေါ်တွင်ရှိသောကြောင့်ငါကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခံခဲ့ရထင်. ဒါဟာကျိန်းသေငါ့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးကူညီပေးခဲ့သည်. ငါအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ပွစျမှားသောမခံသောကြောင့်ငါထင်, နှင့်သင်တန်း၏တိုးတက်မှုများအတွက်အခန်းကိုအစဉ်အမြဲရှိ.
ကနေဖုံးကွယ် • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 10:29 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခငျသညျဤအမျှဝေဘို့သင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဒီ post ရုံငါ့ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်၎င်း၏ကွန်ရက်များနှင့်အတူငါဖြုန်းတီးအချိန်ကိုစဉ်းစားတယ်. ဒါဟာအချိန်နှင့်ငါ့ကိုငါလုပ်နေတာပေါ့အဘယ်အရာကို re-စဉ်းစားရန်ကူညီပေးခဲ့.
သနားခြင်းကရုဏာ • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2014 တွင် 3:56 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါတိုင်းအမှတ်သဘောတူ. အဲဒီမှာအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကတခြားမိန်းကလေးတွေငါ့မိမိကိုယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်တွေ့ရှိခဲ့သောကွောငျ့ငါသေချာဘို့ instagram ရှောင်ရှားကြပြီ. ဒါဟာကျေးဇူးကန်းခံစားရရန်အကောင်းမယ့်. ငါချစ်စရာတိရိစ္ဆာန်များမှာရှာဖွေနေ like. ဟားဟား
ငါသည်ငါ့ fb မဖျက်ပစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား, instagram မြောက်မြားစွာကြိမ်အကောင့်. ငါကသော်လည်းယခုအချိန်အထိဆိတ်ကွယ်ရာမိသားစုဝင်များနှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အကောင်းမယ့်ထင်ပါသလဲ. :)
အိမ်အလှဆင် • မတ်လ 5, 2017 တွင် 3:30 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Excellent ကဘလော့ဂ်! သငျသညျစာရေးဆရာများအယောင်ဆောင်ဘို့မဆိုအကြံပေးချက်များနှင့်အရိပ်အမြွက်ရှိသည် Do?
သငျသညျ WordPress ကိုကဲ့သို့သောအခမဲ့ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူစတင်အဆိုပြုတစ်ခုသို့မဟုတ် paid option ကိုသွားမလား? ဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်စရာထွက်အဲဒီမှာကျွန်မလုံးဝလွှမ်းမိုးတာရှိပါတယ် ..